﷽} Sooyaalka Xidhiidhkii Soomaalida iyo Shiinaha (中 中 关系 / 中 索 關係): – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeMAQAALLO﷽} Sooyaalka Xidhiidhkii Soomaalida iyo Shiinaha (中 中 关系 / 中 索 關係):
Xidhiidhkii Shiinaha iyo Soomaalidu wuxuu ku kaydsan yahay #kaydyaalada(Museums) sooyaalkii ummadda Shiinaha. Dhaxalkii ummadda soomaaliyeed wuxuu kala yaalaa meelkasta iyo kaydyaal kasta oo adduunka oo dhan.
Waa wax uu xidhiidh lahaa waagii hore iyo wax la xaday. Waayo waxa loo baratamayaa adduunka waa aqoon baadhis iyo ilbax raadis. markii la arkay soomaalidu inaanay kuba baraarugsaneyn aasaarteeda, xadaaradeeda, taariikhdeeda iyo khayraadkeeda oo aanay xafidanneyn oo aanay daryeelayn ayaa laga faa’iidaystay oo lawada bililiqaystay.
Aqoonta Shiinaha ee ku saabsan Bariga Afrika xilligii Tang Dynasty (618-907) waxay ka timaaddaa ugu horrayn Ching-hsing Chi (“Diiwaanka Safarrada” iyo Yu-yung Tsa –tsu). Intii lagu guda jiray Boqortooyadii Sung (960-1279), inta badan macluumaadka waxaa lagu ururiyey Chu-fan-chih (“Gazetteer of Foreigners”) iyo Ling-wai Taita. Kaydka boqortooyadii #Ming Dynasty ee ka horaysay boqortooyadii Tatarka (1368-1644) ee socdaalkii badda ee Galbeedka Baddaha Wu-pei-chih (“Xusuusin ku saabsan Diyaargarowga Milatari”), Hsing-ch’a Sheng-lan (“Aragtida Guusha ee raadka Weyn ”), Iyo Ming Shih (“ Taariikhda Boqortooyadii Ming ee shiinaha ”).
Soomaalidu waa ummadda ugu horeysa ummaddaha adduunyada ee leh taariikh aasaareed fog. Soomaalidu waxay ka soo qayb qaadatay wixii xadaarado iyo ilbaxnimo adduunyada soo maray, siday soo weriyaan ama laga helo raadad aasaareedyada adduunka iyo culimada isir-raaca iyo raadraaca bulshooyinkii hore dunida, daraasadkasta oo ay ku sameeyaan isir raaca ummaddihii ugu foggaa iyo ummaddihii ugu ilbaxnimo horeeyey, waxay kusoo tebiyaan raadadkii soomaalida ee ay ummaddahaa kala duwan la lahayd.
Taariikh kastaa waxay soo socotoba ugu danbaynta waxay kusoo ururtaa ama meel uun kasoo gashaa sooyaalkii soomaalida, siduu afkasta oo afafka adduunka ahi meel uun uga soo galo afka soomaaliga.
Magacyadii Soomaalida ay u yaqaaneen ummaddihii kala duwanaa ee adduunkan soo maray xilliyadii kala gedisanaa waxay ahaayeen intaan ka xasuusto;
1 #Macrobian oo ay Giriigu u yaqaaneen
2 #Bobali oo ay Shiinuhu u yaqaaneen
3 #Azania oo ay Roomaanka iyo Carabtii hore u yaqaaneen
4 #Automoli oo ay Yuhuuda, Masaarida iyo giriigu u yaqaaneen
5 #Puntites oo ay faraaciyiinta iyo Mesopotamia ku u yaqaaneen
6 #Sesea oo ay Indo-European ku u yaqaaneen
7 #Barbarian oo giriiga iyo Romanku u yaqaaneen
8 #Geze oo u yaqaaneen xadaaradihii dhexe ee dunida soomaray
9 #Pillars(tiirriyaal) dadkii tiirarka ahaa.
10 #Opone(Boon) oo giriigii hore u yaqaaneen ummadda soomaaliyeed
11 #Karanland oo Sumerian kii hore u yaqaaneen.
Iyo magacyo kale oo badan oo aan arkay intii aan sooyaalka soomaalida ku jiray baadhitaankeeda laakiin aanan hada xasuusnayn oo aan illaabay. Waayo meelkasta oo kaydyaalladii hore iyo aasaarihii hore magacyada soomaalida waa yaalaan iyagoo ummad waliba magac gaara u taqaanay ummadda soomaaliyeed.
Soomaalidu waxay caan ku ahayd Ganaacsiga khayraadkii dhulkooda iyo Xoolahooda oo ay ummadihii adduunyada soo maray oo dhan taariikhda la wadaagtaa. Hadaba soomaalidu shiinaha waxay u dhoofin jireen waxa ka mid ahaa Gerriga oo xoolaha Soomaaliyeed, xoolihii soomaalidu caan ku ahayd qarniyadii dhexe, sida ku xusan kaydyaalada shiinaha [China museums]. Sidokale ku xusan Aasaarta dhulka soomaaliyeed ee LAASGEEL ugu caansantay, waxa ku xardhan dhaxaantaas sawirada xoolihii ugu qaalisanaa ee soomaalida sida aad ka arkaysid sawiradan qormadan.
Sawirkan gerriga ninku hoggaaminaayo ee farta shiinuhu ku qorantay waxaan kasoo qaatay kaydyaalka shiinaha.
Sawirka gerriga dhaxa ku sawiran na waxaan kasoo qaatay dhagaxanta LAASGEEL.
Haddaba waa laba midkood;
1 Soomaalidu waxay soo qaban jireen duurjoogta geyigooda hodanka ah ilahay ugu deeqay. Gerriga intay soo qabtaan ayey laylyi jireen oo ay hoggaan bari jireen sida loo laylyo qaalmaha geela loona hoggaan baro si uu u noqdo rati hayina oo la rarto.
2 Sidokale waxa dhici karta inay soomaalidu siday geela u dhaqato maanta ay waagaa u dhaqan jirtay oo Godad Aasaareedka dhulka soomaalida waa ku xardhan yahay sida kaydyaalada shiinaha qoraalada yaala mid la mida.
Soomaalida iyo Shiinaha waxay leeyihiin xidhiidh dheer oo dhanka ganacsiga, siyaasada, militariga, dhaqanka iyo afka ah.
Xidhiidhka Soomaalida iyo Shiinaha wuxuu soo jiray muddo dheer ka hor dhalashadii Nebi Ciise (csw) iyo waayadii dhexe(Middle Age), isaga oo maraayey ganacsiga, dadyowga labada aag waxay leeyihiin xidhiidh wanaagsan oo qoto dheer. Soomaalidu waxay Shiinaha u dhoofin jirtay khayraadka illaahay ku manaystay dhulkeeda, oo ay ka mid ahaayeen gerriga,Dameer-farowga,uduga sida fooxa, malmalka, maydiga, beeyada iyo xabagta ama xanjada dhirta, ayey ka iibin jireen Boqortooyadii Ming ee Shiinaha, taas oo dhidibada u aastay ganacsato Soomaaliyeed oo madax ka noqda ganacsiga u dhexeeya Aasiya iyo Afrika, iyadoo hawshaasina saamayn ku yeelatay luqadda Shiinaha oo ah luqadda Soomaaliga lidkeeda. Shiinuhu wuxuu u dhoofin jiray alaabooyinka celadon(weel gees ah), noocyada qudaarta iyo siidhkooda hub si loogu soo bedelo fardaha, xayawaanka qalaad(Exotic animal) iyo foolka maroodiga. Halyeygii caanka ahaa ee reer Hui qabiilka muslimka ah ee Turkida Shiinaha badmareenka, dublumaasi iyo Janankii maraakiibta ahaa ee #Zheng_He la odhan jiray, wuxuu yimid safarkiisii ​​afraad iyo kii shanaad ee uu ku aado magaalooyinka ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, Zeila, Merca iyo Berbera. Sidokale nin soomaali ahaa oo la odhan jiray Saciid Muqdisho, oo ahaa ganaacsi sahmiye Soomaaliyeed, ayaa u safray Shiinaha qarnigii 14-aad, xilligaas oo Shiinaha ay xukumayeen Yuan Dynasty, wuxuuna bulshada Shiinaha lasoo galay heshiis ahaa ganacsiga dekadaha iyo magaalooyinka Shiinaha.
Haddaba Aqoonta Shiinaha ee ku saabsan Bariga Afrika xilligii Tang Dynasty (618-907) waxay ka timaaddaa ugu horrayn Ching-hsing Chi (“Diiwaanka Safarrada” iyo Yu-yung Tsa –tsu). Intii lagu guda jiray Boqortooyadii Sung (960-1279), inta badan macluumaadka waxaa lagu ururiyey Chu-fan-chih (“Gazetteer of Foreigners”) iyo Ling-wai Taita. Kaydka boqortooyadii #Ming Dynasty ee ka horaysay boqortooyadii Tatarka (1368-1644) ee socdaalkii badda ee Galbeedka Baddaha Wu-pei-chih (“Xusuusin ku saabsan Diyaargarowga Milatari”), Hsing-ch’a Sheng-lan (“Aragtida Guusha ee raadka Weyn ”), Iyo Ming Shih (“ Taariikhda Boqortooyadii Ming ee shiinaha ”).
138-126 BC (ka hor Qin Dynasty ee 221-206 BC), ay tahay barta taariikhiga ah ee xiriirka Shiinaha iyo Afrika.
Li Anshan wuxuu leeyahay laga soo bilaabo Han Dynasty (206 BC-220AD) ka hor dhalashadii Nebi Ciise (Cs) illaa Sui Dynasty (581-618), ficil ahaan wax tixraac ah lagama helin Afrika dukumiintiyada taariikhiga ah ee Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah xidhiidhada gaarka loo leeyahay ayaa dhacayay, sida ku cad diiwaanada taariikhiga ah ee shisheeye. Qoraalladaani waxay caddeyn u yihiin in maraakiibta ganacsiga ee Shiinaha ay aad ugu firfircoonaayeen dhaqdhaqaaqa ganacsiga Badweynta Hindiya ee ku tiirsanaa Srilanka.
Ergayga su’aasha laga keenay wuxuu ahaa Zhang Qian. Zhang wuxuu ahaa nooc danjire ah oo socdaal ku jooga boqortooyada Shiinaha qarnigii 2aad ee dhalashadii Ciise ka hor, xilligii Han Dynasty. Hawlgalladiisu waxay Shiinaha u fureen boqortooyooyinkii iyo alaabooyin badan oo ka mid ah adduunka ah oo aan Shiinuhu ogeyn.
Intii lagu guda jiray Boqortooyadii Tang (618-907 AD), aqoonta ku saabsan Afrika waxay uga gudubtay si aan toos ahayn una toosin. Waxaa jira seddex diiwaan(Documents) taariikhi ah oo ka socda Boqortooyada Tang oo si cad ugu lug leh Afrika. Kuwaas waxaa ka mid ah Jing Xing Ji (“Diiwaanka Safarkayga”) Du Huan. Sida laga soo xigtay Li Anshan, Du wuxuu ku weheliyay Sarkaalka danjiraha Galbeedka, Gao Xiangzhi, hawlgal saliibi ah oo dhanka galbeed ah. 751, intii lagu gudajiray Dagaalki Fashilmay ee Wabiga Dalas, Du waxaa qabsaday “Dashi” (Carab). In kabadan toban sano kadib, sanadkii 762, Du wuxuu kusoo laabtay gurigiisa isagoo bada kusii jeeda Guangzhou, wuxuuna daabacay Jing Xing Ji. Nasiibdarro buuggii waa la waayey. Si kastaba ha noqotee, in ka badan 1,500 oo erayga qoraalka ah ayaa lagu keydiyey qaybta Difaaca Xudduudda ee Tong Dian, oo sidoo kale sharraxaysa “Boqortooyada Molin, halkaas oo Du ka heshay dadka madow”. Du wuxuu sii sheegay in dadku caabudaan ilaahyo.
Dhigane kale oo Boqortooyada Tang ah, You Yang Za Zu oo Duan Chengshi ah, ayuu sidoo kale ku jiraa cutub qeexaya inay jirtay boqortooyo kale oo Afrikaan ah, Boqortooyada Bobali. Halkan dadku waxay ku cunaan hilib iyo caano laakiin ma cunaan wax kale, – dhaqankaas oo caan ku ah xoola dhaqatada soomaalida xitaa maanta. Duan wuxuu leeyahay dhulkooda weligiis lama qabsan oo gacan shisheeye kuma dhicin, waayo waa dad halyeeyo ah oo dagaallada waxay u adeegsadeen gaashaammo, fool-maroodi iyo geesaha duurjoogta. Sida uu sheegayo Li Anshan, aqoonyahannada badankood waxay rumeysan yihiin in Boqortooyada Bobali ay ku taallo magaalada casriga ah ee Berbera, kana tirsan gobolada soomaaliyeed.
Xilligii Boqortooyadii Ming (1368-1644), markii Masar iyo Itoobiya ay si joogto ah u booqdaan ganacsato iyo dublumaasiyiin Shiine ah, deegaanka Soomaalidu sidoo kale wuxuu ahaa deked caan ah.
Sida laga soo xigtay Dr Sada Mire, agaasimaha Aasaarta Soomaaliyeed, diiwaanka qadiimiga ah (archaeology Chinese and somalis) ee xidhiidhada ganacsi ee u dhexeeya Qadiimiga Shiinaha iyo gayiga Soomaalidu waxay dib ugu noqonayaan badhtamihii Millennium-kii ugu horreeyay illaa maanta. Dr Sada Mire qodisteeda gaarka ah ee aagga waxay iftiimisay dabeecadda isdhexgalka boqortooyooyinkii Islaamka ee hore Geeska Afrika iyo ganacsiga Shiinaha ee ka dhacaya Wadada Silk.
Diiwaanada taariikhiga ah ee Shiinaha iyo taariikhihii hore waxay sidoo kale tixraacayaan ganacsiga lala yeeshay magaalooyinkii hore ee xeebaha Soomaaliya (oo ay kujiraan maanta Muqdisho iyo Berbera) Ganacsiga noocan oo kale ah waxaa ka mid ahaa badeecado ay ka mid yihiin udugga laga soo saaro xeebta badda cas ee dhulka Soomaalida, oo loo isticmaali jiray maxkamadaha Shiinaha iyo macbudyo. Laakiin dhaqdhaqaaqyada ganacsigu waxay fududeeyeen oo keliya gudbinta badeecadaha, sidoo kale fikradaha iyo dhaqamada.
Waqtigii Dawladdii Qing (1644-1911), xidhiidhka Shiinaha iyo Afrika wuxuu soo maray wareeg buuxa. Xidhiidhada rasmiga ahi way yaraadeen laakiin xidhiidhada gaarka loo leeyahay way waarayeen. Ganacsiga tooska ah wuxuu jiddeeyey ganacsi dadban. Shiineysku waxay ku tiirsanaayeen daabacaadda buugaag dhowr ah oo ku saabsan socdaalkii Afrika iyo taariikhda si ay ugu soo gaadhaan qaaradda. Laakiin ma ahayn illaa qarnigii 19aad, ka dib markii ay waddammadii reer Yurub soo dhex galeen Afrika, in xiriirkaas rasmiga ah ee tooska ah ee u dhexeeya waddamada Afrika iyo Shiinaha uu dib u bilowday.
Maanta, xiriirka Shiinaha iyo Afrika waxaa laga yaabaa inuu leeyahay saameyn ka sii fog labada gobol. Dr Ian MacIntosh oo ka tirsan jaamacadda Indiana University, USA, oo fududeeyey sahminta xiriirkii qadiimiga ahaa ee Shiinaha ee sahminta Shiinaha, wuxuu Arnhem Land, Australia ka helay lacag qadaadiic Afrikaan ah oo qarnigii hore jirtay. Shanta shilimaad ee naxaasta ah, oo loo yaqaan inay ka yimaadeen Saldanada Kilwa ee Tansaaniya, ayaa si fiican loo taariikheeyay ka hor safarada yurub ee daahfurka ah ee laga helay gobolka Pacific. Xaqiiqadan kaliya ayaa kicisay xitaa su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan Shiinaha ee sahaminta hore ee Afrika.
Dhulbeeg Axmed Mooge 🖊